कहिले साटिएला त नेपालका भारतीय नोट ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण कहिले साटिएला त नेपालका भारतीय नोट ?
on: १७ मंसिर २०७४, आईतवार १६:२६ लेख | दृष्टिकोण
भारत सरकारले चलनचल्तीमा रहेका ५ सय र हजार दरका कागजी मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाएको पनि वर्ष दिन पुगेको छ । उसले कालो धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठूला दरका नोटलाई ‘डिमोनेटाइजेशन’ गरेको थियो । डिमोनेटाइजेशन अर्थात् चलनचल्तीमा रहेका मुद्रालाई खोटो साबित गर्नुलाई भनिन्छ । त्यसखाले नीति पहिले नै व्यवस्थित गरेर भने कहिले आउँदैन, अचानक आउँछ । तर, कुनै पनि सरकारले त्यस्तो नीति ल्याउँदा भने कुनै निश्चित समयावधि दिएर चलनचल्तीमा रहेका नोटलाई आधिकारिक माध्यमबाट साटिसक्न पनि भन्ने गर्छ । त्यसरी साट्न आउँदा त्यसको स्रोतसमेत मागिने चलन हुन्छ । त्यहाँ ५० दिनको सटही सीमासमय दिइएको थियो र १ लाखभन्दा बढी रकमको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आधिकारिक माध्यम भनेको बैङ्क वा वित्तीय संस्था र हुलाक नै हुन् । एक हिसाबले ठूला दरका नोट कालो धन थुपार्नमा र हातहतियारको कारोबारमा निकै नै सहायक हुने गर्छन् । त्यस्तो कालोधन भनेको कर छली गरी कमाएको धन वा हातहतियार र लागूऔषध कारोबारबाट प्राप्त हुने रकम नै हुने हुँदा त्यसखाले कारोबारहरू बैङ्किङ च्यानलबाट आउँदैनन् ।
उसबेला भारतभर त्यस्तो रुपैयाँ सटहीका लागि बैङ्क र हुलाकहरूमा धान्नै नसकिने गरी सर्वसाधारणको लाम लागेको थियो भने कतिपयको त्यसै अवस्थामा ज्यानसमेत गएको थियो । एटीमहरूले सटहीलाई धान्नै सकेनन् । २ हजारभन्दा बढी १ दिनमा निकाल्न पाइँदैनथ्यो । कतिपयले बोराका बोरा नोटहरू नदीमा फालेका, कतिले जलाएका घटना पनि हेर्न पाइएको थियो । डिमोनेटाइजेशनलाई विपक्षी दलका नेताहरूले ठूलै मुद्दा पनि बनाएका थिए । तर, त्यसले जेजस्तो हङ्गामा ल्याए पनि भारतमा भने यतिखेर त्यसको असर सामान्यजस्तै भएको छ । ५ सय र हजार दरका पुरानाजति डिमोनेटाइज्ड भए पनि उसले भने ५ सय दरका नयाँ नोट र पहिलोपल्ट २ हजार दरको नोट पनि चलनचल्तीमा ल्याएको थियो ।
कालो धन, नक्कली नोट र भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकूत सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने अभीष्टले यस्तो नोटको प्रतिबन्ध लगाएको सार्वजनिक भए पनि यसमा मोदी सरकार कतिको सफल भयो, त्यो यस आलेखको अभीष्ट होइन । मूल आशय के हो भने भारतमा ५ सय र हजार दरका नोटहरूको डिमोनटाइजेशन भएको वर्ष दिन नाघिसक्दा पनि यता नेपालमा भने आधिकारिक रूपमा बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूमा भित्रिएका त्यसखाले नोटहरू अझै साटिन सकेका छैनन् । हुन त कानूनी रूपमा भारतबाहिर १ सय दरभन्दा माथिका नोटहरू प्रचलन गर्नु अर्थात् ५ सय, हजार र २ हजारका नोटहरू अवैधानिक मानिएका छन् ।
नेपाल र भुटानको हकमा भने विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत भारतीय रुपयाको निश्चित रकमसम्मको सटही सुविधा प्रदान हुँदै आएको हो र यस कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहजीकरण गर्दै आएको हो । यसै क्रममा ऊसित हाल अर्थात् नेपालको वित्तीय संस्थाहरूसित करीब १३ करोडबराबरको भारू अर्थात् ७ करोड ८५ लाख भारू साटिन बाँकी रहेको जनाउँदै आएको छ ।
अब यतिखेर आम नागरिकमा ती नोट नसाटिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता छ । हुन त नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले बेलैमा कूटनीतिक शीप देखाउन सकेको भए यो सकस पक्कै आउँदैनथ्यो । भुटानले त्यस्तै खाले भारतीय रुपया सटही गर्न सक्ने तर नेपालले गर्न नसकेको देख्दा यस मामलामा पक्कै पनि नेपालको कूटनीति अब्बल हुन सकेको देखिएन । राष्ट्रका लागि १३ करोड रुपयाको आकार उति ठूलो नहुन सक्छ । तर, मूल कुरा एउटा राष्ट्रले विधिवत स्वीकृति दिएरै अर्को देशमा चलनचल्तीमा आइसकेका पुराना कागजी नोटहरूको डिमानेटाइजेशन प्रक्रियामा भारतीय असहयोग हुनु भनेको या त उसको नियत नै खराब हुनुपर्छ या त नेपाली कूटनीतिको असफलता मान्नुपर्छ । भएको त यी दुईमध्ये एक हो । अब भारतीय पक्षका तर्फबाट विश्लेषण गर्दा उसले साट्नै नचाहेको भने थिएन । मात्र कुरा के रहेको देखियो भने ऊ प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सयका दरले मात्र नेपालीहरूसित रहेका भारतीय रुपयाको सटही सुविधा दिन सक्छ, त्योभन्दा बढी पक्कै होइन ।
यता नेपाली पक्षधरहरू, जो दुईपक्षीय वार्तामा बसेका थिए, तिनको अडान भने २५ हजार रुपयाको थियो । र, ती आफ्ना अडानबाट डेगै चलेनन् र वार्ता विफल भयो । यता के जुहारी चलिरहेको पनि सुन्नमा आयो भने नेपाल सरकारले समयमै केन्द्रीय बैङ्कलाई समयसीमाभित्रै यसबारे आफ्नो निर्णय दिन सकेन र भारतीय पक्षले समयसीमा घर्किसकेपछि गएको अनुरोध अर्थात् भारतीय पक्षले राखेको सटही सीमाको अडानलाई नेपालले स्वीकार गर्ने भन्ने कुरालाई कुनै जवाफ नदिई यतिञ्जेलसम्म पनि मौन नै बसेको देखियो । अब यहाँनेर प्रश्न उठ्छ के भारतले सटही सुविधा नदिन नै चाहेको हो त ? त्यसो भए नेपालसित आधिकारिक च्यानलमा रहेका अर्थात् केन्द्रीय बैङ्कसित रहेको करीब १३ करोड भारतीय कागजी नोट उसो भए के खोस्टा सावित हुने भए त ?
अर्कातिर खुला सिमानाका कारण र परम्परागत रूपमै भारतीय रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीले पठाएका भारतीय रुपया जसलाई भारतकै चाहअनुरूप ४ हजार ५ सयका दरले साटिने भनेको पनि भारतीय पक्षबाट कुनै स्वीकृति नआएकाले तिनका साथमा रहेका जो जेजति छन्, ती पनि सबै खोस्टा हुने देखिएकै छ । किनभने भारतीय पक्षले दिएको समयसीमा घर्किसकेको छ । भारतीय पक्षले राखेको अडानलाई हेर्दा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने उसले नेपाललाई भुटानसरह हेर्दैन । नेपाली पक्षले त्यसबेला यो कुराको अनुमान गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सकेन वा बुझ्न चाहेन र आफ्नो अडानमै रहिरह्यो, जुन अहिले प्रत्युत्पादक सावित भएको देखिन्छ । त्यसबेला उसले बुद्धि नपुर्‍याएकै हो ।
भारतीय शङ्का के छ भने नेपालमा रहेका भारतीय नोट आतङ्कवादसित सम्बन्ध राख्छ । बेलाबेला नेपालमा ठूलै परिणाममा समातिने भारतीय नोटको प्रकरणले उसमा त्यस खाले शङ्का आउने गरेको हो । यस कुरालाई नेपालले बेलैमा कूटनीतिक रूपले बुझ्न सक्नुपथ्र्यो । तर, चुक्यो । सम्भवतः ऊ नेपालको आगत राजनीतिको परिणाम पर्खेर बसेको छ । भलै जाबो १३ करोडको नोट उसका लागि कुनै राजनीतिक प्लेकार्ड नहोस् । तर, कताकति आम नागरिकले त्यतापट्टि पनि आशङ्का गर्न थालेका छन् । कतै आधिकारिक रूपमा रहेका नोट खोस्टा त हुने होइनन् भन्ने भन्दा पनि अब मूल रूपमा आउने सरकारले कसरी आफ्नो कूटनीति प्रयोग गर्छ, यस मामला भन्ने चासो पनि उत्तिकै देखिँदो छ ।